Solar Fusion: teknolojia revolisionera Huawei amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro | Green Renewable
Ny angovo avy amin'ny masoandro dia mifangaro amin'ny teknolojia revolisionera mba hahazoana tombony betsaka amin'izany. Amin'ity tranga ity dia hiresaka momba izany isika Solar Fusion. Izy io dia vahaolana photovoltaic trano fonenana marani-tsaina manaraka izay noforonin'i Huawei. Ity hevitra revolisionera ity dia manantitrantitra ny teknolojia marani-tsaina sy manavao mba hanomezana ny fenitra fametrahana tsotra indrindra sy ny fiarovana avo indrindra ary ny fampandehanana maharitra. Ny tanjona lehibe amin'ny Solar Fusion dia ny ahafahan'ny trano iray manana fanjifana tena 100%.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Solar Fusion, ny toetrany ary ny tanjona fototra.
1 Inona no atao hoe Solar Fusion
2 Inona no atao hoe rafitra Solar Fusion?
4 Tombony azo amin'ny angovo avy amin'ny masoandro
Inona no atao hoe Solar Fusion
Huawei dia namoaka ny vahaolana amin'ny fotovoltaika marani-tsaina ho an'ny taranaka manaraka "FusionSolar", manasongadina ny teknolojia marani-tsaina manavao, manome ny fenitra fametrahana tsotra indrindra, fiarovana ambony indrindra ary azo ampiasaina maharitra, ary ny tanjona dia ny fanjifana tena ao an-tokantrano 100%.. Ny rafitra PV tafo trano fonenana dia tsy maintsy mahafeno ny fangatahana mitombo ho an'ny fampiasana manokana. Noho izany antony izany dia ilaina ny rafitra fitahirizana angovo tsara kokoa.
Rafitra natao ho an'ny tompon-trano matihanina sy ny installer. Ny fametrahana trano fonenana dia tsy maintsy manome ny tompon-trano rafitra fanjifana tena matanjaka sy miompana amin'ny ho avy izay mitazona fahombiazana ambony, flexibility ary fametrahana haingana, ary manome vahaolana marani-tsaina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa sy ny mpanjifa, toy ny diagnostika lavitra ny tsy fahombiazana, mba hahazoana bebe kokoa. Tsara sady kely fikojakojana.
Huawei dia manambatra ny teknolojia nomerika sy Internet farany indrindra miaraka amin'ny teknolojia solar trano fonenana. Ity teknolojia ity dia manome anao ny fanatsarana ny famokarana angovo photovoltaic, Fifandraisana amin'ny bateria plug-and-play mitambatra ary fitantanana herinaratra ao an-trano.
Ao amin'ny rafitra fanjifana tena ho an'ny trano fonenana, ny angovo photovoltaic vokarin'ny panneau solaire dia mahafeno ny filan'ny herinaratra ao an-trano mandritra ny andro, ary ny angovo sisa avoaka dia ampiasaina amin'ny famandrihana ny bateria ary avy eo avoaka mba hanomezana ny filana herinaratra ambony indrindra. Fitakiana jiro amin’ny alina na antoandro. Amin'izany fomba izany, ny rafitra photovoltaic trano fonenana dia afaka mahatratra avo lenta amin'ny fanjifana tena ary mampitombo ny fampiasana tafo mba hahazoana angovo bebe kokoa.
Inona no atao hoe rafitra Solar Fusion?
Ny rafitra dia ahitana ireto ampahany manaraka ireto:
Smart Power Center: High efficiency inverter, miaraka amin'ny fahombiazan'ny 98,6%. Azo ampiasaina avy hatrany ny fifandraisana fitahirizana angovo mitambatra.
Smart Photovoltaic Battery Optimizer: 99,5% fahombiazana. Avelao ny tontonana bebe kokoa amin'ny valin-drihana tsirairay ho an'ny fahombiazan'ny rafitra. Apetraho haingana ao amin'ny trano fanatobiana entana ny rack ary ho fohy kokoa ny fotoana fametrahana eo amin'ny valindrihana. Fanaraha-maso lavitra.
Rafitra fitantanana: miditra mora amin'ny angona avy amin'ny fitaovana finday. Tatitra mavitrika momba ny hetsika sy fanairana. Fitantanana foibe ny rafitra sela photovoltaic.
Smart photovoltaic cell security: mifandray amin'ny optimizer amin'ny alàlan'ny MBUS. Manohana ny fanaraha-maso ara-potoana sy ny maody fitantanana.
Ny bateria smart residential LUNA2000 no nisongadina tamin'ny vahaolana an'i Huawei tamin'ity indray mitoraka ity. Ny bateria dia mampiasa bateria lithium iron phosphate mba hanatsarana ny fiarovana. Izy io dia mampiasa endrika modular ary manohana ny fanitarana herinaratra (5-30 kWh). Ny fonosana batterie tsirairay dia manana optimizer herinaratra namboarina hanohanana ny fitantanana tsy miankina sy ny famoahana.
Ny rafitra Fusion Solar dia manome optimizer hery photovoltaic azo atao izay afaka mametra ny olan'ny alokaloka ao an-trano ary mamela ny fampiasana rafitra photovoltaic amin'ny fametrahana amin'ny fomba mahomby ny tafo mitambatra.
Araka ny filazan'ny orinasa, ny optimizer noforonin'i Huawei dia afaka mampitombo ny fahombiazan'ny angovo amin'ny maody photovoltaic hatramin'ny 30% na inona na inona alokaloka sy ny fitarihan'ny fahombiazana ambany.
Ny Artificial Intelligence Driven Arc Fault Circuit Breaker (AFCI) dia mampihena mavitrika ny mety hisian'ny afo amin'ny alàlan'ny teknolojia fanakatonana haingana, mahatratra aotra valin-drihana malefaka sy aotra arc risika, ary mahatratra roa sosona fiarovana.
Ny fampiharana ny rafitra dia tafo trano fonenana. Ny rafitra fitantanana PV marani-tsaina dia manome ny fikorianan'ny angovo amin'ny fotoana tena izy sy ny famakiana fifandanjana angovo, ary koa ny fitantanana ny fahombiazan'ny tontonana PV.
Ny safidy fanefena amin'ny fomba fanaraha-maso dia ahitana ny fampiasana tena ambony indrindra, laharam-pahamehana amin'ny famoahana grid, fitehirizana PV laharam-pahamehana, laharam-pahamehana noho ny fampidirana angovo PV be loatra ao anaty grid. Ny rafitra dia azo amboarina amin'izay ny mpanjifa dia mandany angovo bebe kokoa rehefa ambany ny vidiny ary mitahiry ho azy rehefa lafo ny vidiny.
Andeha hojerentsika hoe inona no tombony amin'ny fampiasana an'io karazana angovo io:
Izy io dia angovo madio tanteraka izay manampy amin'ny fampihenana ny dian-tongotra karbônina. Noho ny fampiasana azy dia manalavitra ny famokarana entona mampidi-doza isika ary tsy mandoto mandritra ny famokarana azy na mandritra ny fampiasana azy. Tsy misy afa-tsy ny fandotoana kely fotsiny rehefa mamorona ny panneaux solaire.
Tsy toy ny angovo azo havaozina hafa, ity angovo ity dia afaka manafana zavatra.
Tsy mitaky karazana fitrandrahana tsy tapaka ny fitaovana mba hiasa. Izany dia mahatonga azy io ho angovo tsy lafo izay mora kokoa ny fampiasam-bola voalohany amin'ny taona. Marina fa anisan’ny olana lehibe nianjady tamin’ny angovo azo havaozina hatramin’ny nanombohany ny fampiasam-bola voalohany sy ny taham-piverenany, na dia tsy misy intsony aza izany noho ny fivoaran’ny teknolojia. Paneau solaire afaka manana fiainana mahasoa 40 taona izy io.
Ny tara-masoandro dia be dia be ary azo ampiasaina ka ny fampiasana panneau solaire dia safidy azo atao. Saika ny toerana ara-jeografika rehetra amin'ny planeta dia afaka mampiasa angovo avy amin'ny masoandro. Zava-dehibe ny manamarika fa ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro dia ny tsy ilana tariby. Izany dia manampy amin'ny fametrahana any amin'ny faritra izay sarotra ny fametrahana wiring toy izany.
Ny tombony hafa amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro dia ny fampihenana ny fampiasana solika fôsily, ka manampy amin'ny fitsitsiana ny harena voajanahary sy ny fampihenana ny fandotoana ny tontolo iainana.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny Solar Fusion sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo Solar Photovoltaic » Solar Fusion
Ahoana no hialana amin'ny fiovan'ny toetr'andro